Sh.Yuusuf Cali Ugaas “ Qabaa’il Hiiraan dhamaantood Mujaahidiinta ayay la safanyihiin , Xabashiduna way fashilantay”. SomaliEnglishArabicKiswahiliVideosMuxaadaraadAl-kataaib ChannelAyaama CumarBarnaamijyoAnaashiidAudioMuxaadaraadMaalmihii DahabigaBarnaamijyoWareysiyoGabayoAnaashiidMaqaalloWarbixinoBayaanaadContact usAbout Us
Sh.Yuusuf Cali Ugaas “ Qabaa’il Hiiraan dhamaantood Mujaahidiinta ayay la safanyihiin , Xabashiduna way fashilantay”. Written by Maamul on 03 July 2012. Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan Sh.Yuusuf Cali Ugaas oo ka warbixiyay Xaalada Wilaayada ayaa sheegay in Duullaankii ay Xabashida Itoobiya kusoo qaaday Wilaayada Hiiraan uu dhicisoobay isla markaana ay ku fashilmeen inay hirgeliyaan qorshihii ay in mudda ah kasoo shaqaynayeen ee ahaa inay Hiiraan ka dhisaan Maamul dabadhilif ah oo iyagu ay amarka siiyaan.
Sh.Yuusuf Cali Ugaas ayaa intaas ku daray in waxyaalaha ay Xabashidu sida weyn ugu fashilantay ay ka mid tahay iyagoo wax taageero ah ka waayay Qabaa’ilka Muslimiinta ah ee Reer Hiiraan, taas badalkeedana ay Qabaa’ilka Gobolka oo dhan ay Mujaahidiinta Garab taaganyihiin, Rag, Hub iyo Dhaqaale intabana ay ku bixiyaan sidii Cadawga soo jireenka ah ee Itoobiya looga xoreyn lahaa Magaalada Baladweyne.
“ Dhagartii iyo hagar-daamadii ay la damacsanaayeen ummada Muslimka ah ayaga ayuu Allaah SW ku celiyay, Waxay ku fashilmeen inay Cududa Milatari ee Mujaahidiinta bur-buriyaan, waxay 2KM hore usoo dhaafi la’yihiin Baladweyne, dadkuna waxay fahmeen in Xabashidu ay u socoto oo kaliya inay Sharciga Islaamka meesha ka saarto” Ayuu hadalkiisa kusii daray Sh.Yuusuf Cali Ugaas.
Waaliga Hiiraan ayaa sidoo kale ka waramay howlo Caafimaad oo ay maalmihii lasoo dhaafay ka wadeen deegaano hoosyimaada Wilaayada iyo sidoo kale olole loogu magacdaray “ la dagaalanka Jahliga” kaas oo dadka reer miyiga ah ee aan awoodin inay magaalooyinka yimaadaan fursad loogu siinayay inay Qoraalka iyo Aqrinta bartaan arintaas oo uu sheegay inay meel wanaagsan marayso.
Wilaayada Hiiraan ayaa ka mid ah goobahii ay Xabashida Itoobiya duullaanka kusoo qaaday, waxayna horaantii sanadkan qabsadeen Magaalada Baladweyne iyagoona markaas ku hanjabayay inay qabsan doonaan ilaa Magaalada Jowhar, Balse arinkaas ayaa dhalanteed noqday iyadoo ay Mujaahidiintu hada gacanta ku hayaan dhamaan Degmooyinka iyo deegaanada Hiiraan marka laga reebo Baladweyne iyo Matabaan.Adde HassanSomaliMeMo